Sex City Archives - Filmy Kura : Filmy Kura
चलचित्र क्षेत्रमा नवप्रवेशी कलाकारको आगमन बढ्दो छ । त्यसमा पनि १६/१७ वर्ष पार नगर्दै नायिका हुने हुटहुटि धेरै नै छ । यस अघि केही म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी कला राई हिरोइन हुने उद्देश्यले यतिबेला जोडतोडका साथ लागिपरेकी छिन् । ‘मुर्चुङ्गा’ नामक फिल्मबाट डेव्यू गरेकी...
फिल्मको रंगीन दुनियामा मिसिन आएकी नवनायिका रुवि शर्मा २१ औं सताब्दीमा स्वतन्त्र भएर हिड्न पाउनु पर्ने तर्क गर्छिन् । उनलाई यतिबेला अरु केही चाहिएको छैन । फिल्म खेल्न पाए र खेलेको फिल्म राम्रो भएर अडियन्सले कलाकारको रुपमा चिनिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । तर त्यो उपलब्धि...
पूर्व धरान देखि आर.जे अर्थात रेडियो जक्की बन्ने उद्देश्य लिएर अञ्जना आर.सी काठमाण्डौ आइन् । उनले केही इन्स्टिच्यूटमा गएर तालिम पनि लिइन् तर उनको आर.जे बन्ने चाहना पूरा हुन सकेन । रेडियो राजधानीको ढोका सम्म पुगेकी अञ्जना विविध कारण पछि रेडियो कार्यक्रम चलाउने तिब्र...
निर्माताले अफर गरे डेटिङ जान तयार छु : सोनिया जि.आर.
फिल्मको रंगिन दुनियाँमा नव प्रवेशीको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो समय चले कै आर्टिस्टलाई समेत कतिपय खारिएका नयाँ प्रतिभाले विस्थापित गरिदिएका छन् । त्यसो त आजका नयाँ भोलिका पुराना हुन् । यही क्रममा आफ्नो करिअर फिल्म क्षेत्रमै बनाउने सोच लिएर सोनिया जि.आर. फिल्ममा प्रवेश...